Pluto သည် ဂြိုဟ်မဟုတ်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းများ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 13/06/2022 10:00 | နက္ခတ္တဗေဒ
ပလူတို (Pluto) သည် မေ့သွားသောဂြိုဟ်သည် ဂြိုဟ်မဟုတ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေအဖွဲ့အစည်းတွင် ဂြိုလ်ကိုးလုံးရှိခဲ့ဖူးပြီး ဂြိုလ်တစ်ခုသည် ဂြိုလ်ဟုတ်မဟုတ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ကာ ပလူတိုဂြိုလ်များ၏ ဆက်စပ်မှုမှ ထွက်လာရမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ၎င်းအား ဂြိုဟ်အမျိုးအစားတွင် ၇၅ နှစ်ကြာ လုပ်ကိုင်ပြီးနောက် လူပုဂြိုလ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်း၏ပတ်လမ်းကို ဖြတ်သန်းသွားသော ကောင်းကင်ကိုယ်ထည်ကို ပလူတိုဟုခေါ်သောကြောင့် ဤဂြိုဟ်၏ အရေးပါမှုမှာ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ လူတော်တော်များများ မသိကြဘူး။ ပလူတိုဟာ ဘာကြောင့် ဂြိုဟ်မဟုတ်တာလဲ။.
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆောင်းပါးတွင် ပလူတိုဂြိုလ်မဟုတ်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းများနှင့် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။
2 လူပုဂြိုလ်များအကြောင်း အချက်အလက်
4 ပလူတို၏ လည်ပတ်မှု
5 ပလူတိုဟာ ဘာကြောင့် ဂြိုဟ်မဟုတ်တာလဲ။
လူပုဂြိုလ်သည် 247,7 နှစ်တိုင်း နေကို လှည့်ပတ်နေပြီး ပျမ်းမျှ အကွာအဝေး 5.900 ဘီလီယံ ကီလိုမီတာ ရှိသည်။ ပလူတို၏ ဒြပ်ထုသည် ကမ္ဘာမြေထုထည်၏ 0,0021 ဆ နှင့် ညီမျှသည်။ သို့မဟုတ် လ၏ ဒြပ်ထု၏ ငါးပုံတစ်ပုံ။ ၎င်းသည် ဂြိုလ်ဟု ယူဆရန် အလွန်သေးငယ်စေသည်။
ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နက္ခတ္တဗေဒသမဂ္ဂရဲ့ ဂြိုလ်ဖြစ်ခဲ့တာ ၇၅ နှစ်ရှိပြီ။ 75 ခုနှစ်တွင် ၎င်းသည် မြေအောက်ကမ္ဘာ၏ ရောမနတ်ဘုရားထံမှ ၎င်း၏အမည်ကို ရရှိခဲ့သည်။
ဤဂြိုလ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြောင့် Kuiper Belt ကဲ့သို့သော ကြီးမားသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများကို နောက်ပိုင်းတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Eris ရဲ့နောက်မှာ အကြီးဆုံး လူပုဂြိုလ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ အချို့သောရေခဲအမျိုးအစားများမှ အဓိကဖွဲ့စည်းသည်။ ရေခဲကို အေးခဲနေသော မီသိန်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်၊ နောက်တစ်ခုက ရေ၊ နောက်တစ်ခုက ကျောက်ဖြစ်သည်။
ပလူတို (Pluto) နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များသည် အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 1930 ခုနှစ်များကတည်းက နည်းပညာသည် ကမ္ဘာနှင့်ဝေးသော အရာဝတ္ထုများကို သိသာထင်ရှားစွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် လုံလောက်အောင် မတိုးတက်သေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်အထိ ၎င်းသည် အာကာသယာဉ်ဖြင့် မလည်ပတ်နိုင်သော တစ်ခုတည်းသောဂြိုဟ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
2015 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင်၊ 2006 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာမြေမှ ထွက်ခွာသွားသော အာကာသမစ်ရှင်အသစ်ကြောင့် သူသည် လူပုဂြိုလ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များစွာကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမြေသို့ရောက်ရှိရန် တစ်နှစ်ကြာမြင့်သည်။
နည်းပညာများ တိုးမြင့်လာမှုကြောင့် ပလူတိုနှင့်ပတ်သက်သော ရလဒ်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များစွာကို ရရှိလျက်ရှိသည်။ ၎င်း၏ပတ်လမ်းသည်အတော်လေးထူးခြားသည်၊ ပေးထားသည်။ ဂြိုလ်တုနှင့် ၎င်း၏ လှည့်ပတ်မှု ဆက်ဆံရေး၊ ၎င်း၏ ဝင်ရိုး လည်ပတ်မှုနှင့် ၎င်းကို ထိမှန်သည့် အလင်းပမာဏ အပြောင်းအလဲ၊. ဤပြောင်းလဲမှုများအားလုံးသည် ဤလူပုဂြိုဟ်အား သိပ္ပံပညာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
၎င်းသည် ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ကျန်ကမ္ဘာ့ထက် နေနှင့်ဝေးကွာသော နေအဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်သည်။ သို့သော် ၎င်း၏ပတ်လမ်း၏ ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်၊ ၎င်းသည် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်ပတ်လမ်းထက် အနှစ် 20 ပိုနီးပါသည်။ ပလူတိုသည် ၁၉၇၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီး မတ်လ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အထိ နေကို မချဉ်းကပ်ခဲ့ပေ။ 2226 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဂြိုလ်တစ်ခုက အခြားဂြိုဟ်တစ်ခုရဲ့ ပတ်လမ်းကြောင်းထဲကို ဝင်သွားတာကြောင့် တိုက်မိနိုင်ခြေ မရှိပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပတ်လမ်းသည် ecliptic လေယာဉ်နှင့် 17,2 ဒီဂရီ ဆက်စပ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊ ပတ်လမ်းကြောင်းတွေရဲ့ လမ်းကြောင်းတွေက ဂြိုဟ်တွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ မဆုံနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။
ပလူတိုတွင် လငါးလုံးရှိသည်။ ၎င်း၏အရွယ်အစားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထက် လ4လုံးပိုပါသည်။ Charon ဟုခေါ်သော အကြီးဆုံးလသည် ပလူတို၏ ထက်ဝက်ခန့်ရှိသည်။
ပလူတို၏ လေထုသည် နိုက်ထရိုဂျင် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ မီသိန်းနှင့် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် ပမာဏအချို့ဖြစ်သည်။ ဤဓာတ်ငွေ့များသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဖိအားထက် အဆပေါင်း 100.000 လျော့နည်းသော်လည်း၊ ဤဓာတ်ငွေ့များသည် ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အချို့သော ဖိအားကို ထုတ်ပေးသည်။
အစိုင်အခဲ မီသိန်းကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် လူပုဂြိုလ်၏ အပူချိန်မှာ 70 Kelvin အောက်တွင် ရှိနေသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ပတ်လမ်းကြောင်း၏ အထူးအမျိုးအစားကြောင့် အပူချိန်သည် ၎င်းတစ်လျှောက်တွင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကွဲပြားမှုရှိသည်။ ပလူတိုသည် နေနှင့် 30 AU နီးပါးနှင့် နေနှင့် 50 AU အထိ ကွာဝေးနိုင်သည်။ နေမှ ဝေးရာသို့ ရွေ့လျားသောအခါ၊ ပါးလွှာသော လေထုသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အေးခဲပြီး ကျဆင်းသွားသည့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
စနေဂြိုဟ်နှင့် ဂျူပီတာကဲ့သို့သော အခြားဂြိုဟ်များနှင့် မတူဘဲ ပလူတိုသည် အခြားဂြိုလ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်ကျောက်ဆောင်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် လူပုဂြိုလ်ပေါ်ရှိ ကျောက်တုံးအများစုသည် အပူချိန်နိမ့်ပါးမှုကြောင့် ရေခဲများနှင့် ရောနှောနေကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ငါတို့အရင်တွေ့ဖူးသလိုပဲ၊ မတူညီတဲ့ဇစ်မြစ်တွေရှိတဲ့ ရေခဲတွေ။ အချို့ကို မီသိန်းနှင့် ရောစပ်ပြီး အချို့ကို ရေဖြင့် ရောစပ်ထားသည်။
ဂြိုဟ်ဖွဲ့စည်းစဉ်အတွင်း အပူချိန်နှင့် ဖိအားများ နည်းပါးသော ဓာတုပေါင်းစပ် အမျိုးအစားများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်အချို့ ပလူတိုသည် အမှန်တကယ် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ ပျောက်ဆုံးနေသောလဖြစ်ကြောင်း မှန်းဆပါ။. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နေအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းစဉ်အတွင်း လူပုဂြိုလ်အား မတူညီသော ပတ်လမ်းထဲသို့ ပစ်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Charon သည် တိုက်မိခြင်းမှ ပေါ့ပါးသော အရာများစုပုံနေသဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
Pluto သည် လ၏ပတ်လမ်းများနှင့် ထပ်တူကျသောကြောင့် လည်ပတ်မှုတစ်ခုပြီးမြောက်ရန် ရက်ပေါင်း 6.384 ကြာသည်။ ထို့ကြောင့် Pluto နှင့် Charon သည် အမြဲတစေ တူညီနေပါသည်။ ကမ္ဘာ၏ လည်ပတ်ဝင်ရိုးသည် 23 ဒီဂရီဖြစ်ပြီး၊ ဤဂြိုဟ်သိမ်၏ဝင်ရိုးလည်ပတ်မှုသည် 122 ဒီဂရီဖြစ်သည်။ ဝင်ရိုးစွန်းများသည် ၎င်းတို့၏ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်း၌ နီးပါးရှိသည်။
၎င်းကို ပထမဆုံးမြင်ရသောအခါ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းမှ အလင်းရောင်ကို မြင်တွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပလူတို (Pluto) ရှုမြင်ပုံ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဂြိုဟ်သည် မှောင်မိုက်နေပုံပေါ်သည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာမြေမှ ဂြိုဟ်သိမ်၏ အီကွေတာကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
1985 နှင့် 1990 အကြားတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂြိုဟ်သည် Charon ၏ပတ်လမ်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ထို့ကြောင့် Pluto ၏ နေလကြတ်ခြင်းကို နေ့တိုင်း မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤအချက်ကြောင့် ဤလူပုဂြိုလ်၏ albedo နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်အများအပြားကို စုဆောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ albedo သည် ဂြိုလ်တစ်ခု၏ နေရောင်ခြည်၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို သတ်မှတ်ပေးသည့် အချက်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သတိရမိသည်။
အထူးသဖြင့် ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နက္ခတ္တဗေဒသမဂ္ဂ (IAU) သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အလွန်အရေးကြီးသော အစည်းအဝေးတစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့သည်- ဂြိုလ်တစ်လုံးကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Mike Brown သည် ပလူတိုထက် ပိုမိုကြီးမားသော Eris အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ယခင်က ဂြိုလ်တစ်လုံးကို အတိအကျ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး Pluto သည် အချေအတင်ဆွေးနွေးမှု၏ဗဟိုတွင်ရှိခဲ့သည်။ Pluto သည် ဂြိုလ်တစ်ခုအဖြစ် အရည်အချင်းပြည့်မီသောကြောင့် ထိုအချိန်က ဤကန့်သတ်ထားသော နက္ခတ္တဗေဒပညာသည် အဘယ်ကြောင့် Iris မကျသနည်း။ သို့ဆိုလျှင်၊ Kuiper ခါးပတ်တွင် အလားအလာရှိသော ဂြိုဟ်မည်မျှ ကျန်နေမည်နည်း။
2006 IAU အစည်းအဝေးတွင် ပလူတိုသည် ၎င်း၏ဂြိုလ်ခေါင်းစဉ်ကို ဆုံးရှုံးသွားသည်အထိ အချေအတင်ဆွေးနွေးမှုများ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နက္ခတ္တဗေဒသမဂ္ဂမှ ဂြိုဟ်တစ်လုံးအား ကြယ်တစ်လုံးအား လှည့်ပတ်နေသော အကြမ်းဖျင်း စက်လုံးပုံကိုယ်ထည်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။. ထို့အပြင် ဂြိုလ်များသည် ရှင်းလင်းသော ပတ်လမ်းကြောင်းရှိရမည်။
ပလူတိုသည် နောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့် မပြည့်မီသောကြောင့် ၎င်းအား နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဂြိုဟ်အဖြစ် တရားဝင် ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ သို့သော် ပလူတိုသည် တရားဝင်စာရင်းသို့ ပြန်သွားသင့်သည်ဟု အချို့က ငြင်းခုံနေကြဆဲဖြစ်သည်။ 2015 ခုနှစ်တွင် NASA ၏ New Horizons မစ်ရှင်က "ရှေးဟောင်း" ဂြိုဟ်သည် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များထင်သည်ထက် ပိုမိုကြီးမားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Mission commander Alan Stern သည် ဂြိုလ်တစ်ခု၏ လက်ရှိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို သဘောမတူသူဖြစ်ပြီး Pluto သည် နေစကြာဝဋ္ဌာစနစ်၏ ဂြိုလ်များကြားတွင် ရှိနေသင့်သည်ဟု ငြင်းခုံခဲ့သည်။
ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ ပလူတိုဂြိုလ်မဟုတ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သိနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » နက္ခတ္တဗေဒ » ပလူတိုဟာ ဘာကြောင့် ဂြိုဟ်မဟုတ်တာလဲ။